Ny Tendrombohitra Amin’ny Endrika Hafa: ‘Ski Challenge’ Ao Afghanistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2017 18:23 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, 日本語, Português, 繁體中文, English
Nahazoana alalana avy amin'ny Afghan Ski Challenge.
Efa nandritra ny taonjato maro ny tandavan-tendrombohitra manaka-danitra ao Afghanistan no fiarovana tsara indrindra manoloana ny firohotan'ny vahiny, saingy misy ny fomba hafa azon'izy ireo ampiasaina azy ho an'ny firenena.
Hatramin'ny taona 2011, nizotra isan-taona manomboka volana Febroary ka hatramin'ny Martsa ny Afghan Ski Challenge. Ao amin'ny tendrombohitra Koh-i-Baba, tsy lavitra ny misy ny nandarohan'ny Taliban baomba ny sary sokitra Boddha goavana amin'ny vato ao amin'ny faritra afovoany ao Bamyan no anatanterahana izany.
Ahitana hazakazaka ho an'ny matihanina sy ny mpankafy ao, izay ifaninanan'ny ankamaroan'ireo Afghan mpanao ski sy ny mpifanandrina iraisampirenena.
Nokarakarain'ny Bamyan Ski Club, fikambanana tsy mitady tombontsoa miorina ao Zurich niorina enin-taona lasa izay, ny hetsika ary ny hampiroborobo ny ski sy ny fizahantany ao Bamyan no tanjon'izy ireo.
Rakotra ranomandry enim-bolana isan-taona, safidy sarotra ho an'ireo vahiny tia mianjoria ny tandavan'i Baba. Fanampin'izany, asehon'ireo fampahalalam-baovao iraisampirenena ho rava sy henika mpikomy i Afghanistan.
Saingy lavitry ny loza avy amin'ny Taliban sy ny ISIS ity faritanin'i Bamyan mahantra sy tsy raharahian'ny governemanta foibe, ary misokatra ho an'ny fizahantany ao an-toerana sy iraisampirenena.
Nanomboka tamin'ny taona 2011, mpanao ski 30 eo ho eo avy amin'ny firenena tahaka an'i Aostralia, Nouvelle-Zélande, Fanjakana Mitambatra, Frantsa, Alemaina, Soisa, Norvezy, Slovenia ary Etazonia no mitsidika an'i Bamyan isan-taona. Riaka antenain'ireo mpikarakara ny Afghan Ski Challenge fa hitombo hatrany hatrany.
Maro ireo tonga mba hianjoria fotsiny. Ny fanaovana ski tsy amin'ny toerana fanaovana azy (hors-piste) — tsy tahaka ny ski alpin — dia nitombo tahaka ny indostrian'ny asa tanana ao Amerika Avaratra saingy nivadika ho hetsika niitatra nankany amin'ireo firenena tsy dia falehan'ny mpizahan-tany. Miroborobo ao amin'ny ranomandry tsy fandiavan'olona sy tsy misy fotodrafitrasa ankapobeny fahita any amin'ireo toerana fanaovana ski, tahaka ny seza sy bokotra fanakadrihana.
Tamin'ny Febroary 2012, nosokafan'ny Sampan-draharaha misahana ny Fitetezan-tany ao Rah-e Abrishom ao Bamiyan ny sekolin'ny ski voalohany, manome fiofanana momba ny ski ho an'ireo tanora Bamiyanis 60 mandritra ny fianarana voalohany naharitra iray volana, izay tarihan'ireo vahiny mpanazatra miisa roa.
Misy klioba fanaovana ski miisa dimy ankehitriny ao Bamiyan, izay manana mpikambana maherin'ny 200. Mandritra izany fotoana izany, tafiditra mpikambana tao amin'ny Federasionan'ny ski iraisampirenena tamin'ny taona 2016 ny Federasionan'ny ski ao Afghanistan izay niorina tamin'ny taona 2015.
Tsy manana fitaovana ampy (ski, kiraro fanaovana ski, baoty sy fiarovan-doha) izay mety hahatratra maherin'ny 1.000 dolara ny fitambaran'ny vidiny ny ankamaroan'ireo mpanao ski ao an-toerana. Avy amin'i Soisa, ny Fikambanana Aga Khan, ny Ski Club Bamiyan ary ny Fikambanan'ny Fizahan-tany ao Bamiyan ny fitaovana ampiasain'ireo mpanao ski ao amin'ny Afghan Ski Challenge.
Na izany aza, miankina amin'ny zava-baovao sy izay hananan'izy ireo eo am-pelatanana ny sasany.
Araka ny nolazain'ny vahiny iray tamin'ny fanadihadian'ny Guardian, “Nanapa-kevitra haka tahaka anay izy ireo, amin'ny fanamboarana ski azy ireo manokana avy amin'ny hazo fisaka ary mamatotra izany amin'ny kiraro amin'ny alalan'ny tady sy lamba. Anisan'ny fahafinaretana amin'ny fankanesana aty ny manao ski miaraka amin'izy ireo”.
Manantena hampiditra Afghan mpanao ski roa efa niofana amin'ny Lalao Olaimpika Ririnina taona 2018 ny Federasionan'ny ski Afghan.
Manao ski ihany koa ny vehivavy
Anisany tao anatin'ny Afghan Ski Challenge hatramin'ny nanombohany ny fandraisana anjaran'ny tovovavy, ary mitombo isa isan-taona. Ankehitriny, manana mpikambana vehivavy 30 ny Ski Club ao Bamiyan, izay mpandresy tamin'ny hetsika Challenge ny sasany tamin'izy ireo.
Noho ny mponiny izay avy amin'ny foko Hazara ny ankamaroany, mirehareha ho iray amin'ireo manana taham-pampianarana vehivavy tsara indrindra ao Afghanistan i Bamiyan. Izy ihany koa no faritra voalohany notantanin'ny vehivavy taorian'ny fidarabohan'ny Taliban.
Sary nahazoana alalana avy amin'ny Afghan Ski Challenge.
Asa sarotra amin'ny ankapobeny ny fampidirana ny vehivavy ao anatin'ny fiainam-bahoaka ao Afghanistan taorian'ny fitondran'ny Taliban. Raha mitohy ny fanamby ao Bamiyan, mamela heloka kokoa ny tontolo ara-tsosialy.
Ny fanatanjahantena sy ny politika
Misy idiran'ny politika ny fanatanjahantena ao Afghanistan. Satria foko Pashtuns ohatra ny ankamaroan'ny mpilalao cricket Afghan, mankahala izany lalao izany ny vondrona ara-poko hafa sasany. Na izany aza, nanokam-bola fanampiana goavana ho an'ny cricket ny governemanta.
Vao haingana ny filoha Ashraf Ghania no nandray ireo mpilalao cricket tao an-tranony tamin'ny fiverenan'izy ireo avy any India, ary nanatevin-daharana ny mpijery tao India i Abdullah Abdullah, lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny governemanta, nanohana ny ekipa tamin'ny fiadiana ny Amboara Manerantany T20.
Mahazo fandrisihana matetika avy amin'ny manampahefana ambony ao amin'ny governemanta ny ekipam-pirenena, izay nahavita zavatra tsara.
Niara-nitabataba nidera ny ekipa cricket tao amin'ny kaonty Twitter an'izy ireo ihany koa ny filoha Ghani sy ny tale mpanatanteraka Abdullah :
Fandresena mahagaga, kapoka an-kibay mahatalanjona avy amin'ny G. Naib! Tena nahafinaritra tanteraka. Te hiarahaba ireo mpankasitraka ihany koa. Tohizo hatrany, ry maherifonay !
Arahabaina i Afghanistan noho ny fandreseny manan-tantara an'i Irlandy tamin'ny Fiadiana ny Amboara Ifanandrinan'ny Kaontinanta sy nandresy an'i India tamin'ny Amboara Aziatika.
Matetika ampiarahana amin'ny Hazaras ny taekwondo. Foko Hazara ilay nahazo medaily volamena indroa tamin'ny Olaimpika, Rohullah Nikpah, izay niala an-daharana ho fanoherana ny kolikoly ao anatin'ny Komitin'ny Olaimpika Afghan. Matetika mahazo fifantohana amin'ny fampahalalam-baovao ao an-toerana ny kolikoly ao anatin'ny Komity ny Olaimpika Afghan sy ny Federasionan'ny fanatanjahantena Afghan.
Tsy miparitaka lavitra an'i Bamyan ny ski ary tsy raharahian'ny governemanta mihitsy.
Nitaraina tamin'ny resaka an-tariby nifanaovana tamin'ny Global Voices i Agha Mohammad Kargar, filohan'ny federasionan'ny ski Afghan fa “tsy miraharaha mihitsy ity fanatanjahantena ity ny governemanta”.
“Tsy misy ny teti-bola ho an'ny federasiona, miantehitra amin'ny fanomezana izahay mba hanentsenana ny fandaniana”, hoy izy tamin'ny Global Voices.
Zeorzia 17 ora izay